प्रधानमन्त्री ओली हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हो : राज्यमन्त्री दुगड — Arthatantra.com
Arthatantra.com > समाचार > प्रधानमन्त्री ओली हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हो : राज्यमन्त्री दुगड
प्रधानमन्त्री ओली हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हो : राज्यमन्त्री दुगड
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिराज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नु वा हटाउनेबारे सोच्नुपनि अपराध हुने र पाप लाग्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘अहिले प्रधानमन्त्रीको विकल्प सोच्नु वा हटाउनेबारे सोच्नु दोष हो, यो अपराध हो । पाप लाग्छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री दुगडले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बदल्ने काम गर्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री बदल्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्रीहरु बदलेर देश बन्दैन् ।
प्रधानमन्त्री हट्दैमा देश बन्छ भनेर कसले ग्यारेन्टी लिन्छ ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्वालिटीको काम गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भन्नुभएको छ । प्रमाणसहित आए उहाँले कारबाही गर्छु भनेर सार्वजनिक रुपमै प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘उहाँको नेतृत्वको वर्तमान सरकारले स्मुथ्ली काम गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा सानातिना कुरामा अल्झिनु हुँदैन् ।’
नेपालले संसदबाट नयाँ नक्सा पारित गरेपछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध टुटाउनेबारे भ्रामक कुरा बाहिर आएको पनि उनले टिप्पणी गरे । दुगडले भने,‘भारतले कहिल्यैपनि त्यस्तो काम गर्दैन् । नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सानो–सानो कुराले दुई देशबीचको सम्बन्ध टुट्दैन् । नाकाबन्दी लगाउँछ भन्नु भ्रामक कुरा हो ।’ नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षीय सम्बन्धमा जनस्तरमा द्धेष उत्पन्न गराउने काम कतैबाट पनि हुन नहुने उनको आग्रह छ ।
उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्ने काम गर्न नहुने जिकिर गरे । दुई देशबीच धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समानता भएकोले द्धिपक्षीय सम्बन्धमा खलल वा आँच पुर्याउने काम गर्न नहुनेतर्फ उनले सचेत गराए ।
सरकारप्रति जनताले असन्तुष्टि पोख्नु स्वभाविक भएको उनको तर्क छ । वर्तमान सरकार गठन भएको अढाई वर्ष पूरा हुन लागेको र सरकारप्रति जनताको ठूला–ठूला आशा र अपेक्षा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने,‘जनताले नेकपालई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका छन् । सरकारप्रति जनताको हाई एक्सपेक्टेशन हुनु स्वभाविक हो । ईतिहासमै पहिलोपटक नेकपालाई यो अवसर प्राप्त भएको छ ।
बलियो सरकारसँग जनताको अपेक्षा र आशा हुनु स्वाभाविक हो ।’ उनले सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सकेको काम गरिरहेको सुनाए । उनले भने,‘आजको भोलि नै समृद्धि हाँसिल गर्न सकिँदैन् । सरकारसँग जादुको छडी त छैन । तर, सरकारले राम्रो काम गरिराखेको छ ।
स्टेप–बाई–स्टेप सरकारले देश र जनतासामू आएका चूनौति र समस्याहरु समाधान गर्दै गैरहेको छ । केहीको त काम मात्रै सरकारको आलोचना गर्ने छ ।’
उनले सरकारको कामबाट के उद्योगी तथा व्यवसायीहरु खुशी छैनन् त ? भन्दै उल्टै प्रश्न गरे । उनले भने,‘हिजोजस्तो परम्परागत शैलीमा काम गर्ने कुरा परिवर्तन भएको छ । कालाबजारी र मूल्यवृद्धि रोकिएका छन् ।
सरकारले चूनौतिका बावजदुतपनि सकारात्मक काम गरिरहेको छ ।’ सरकारले कोरोना महामारीको संकटको बावजुद बजेटपनि सन्तोषजनक ल्याएको उनले दाबी गरे । उनले भने,‘बजेटले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिएको छ । उद्योग, धन्दा, कलकारखाना जारी छन् । बजेटमा देश समृद्ध बनाउने परिकल्पना छ ।’ तर, केहीले बजेटमाथि पनि दोषारोपण गरिरहेको उनको गुनासो छ । ‘जस्तै राम्रो बजेट आएपनि ठीक छैन भन्ने प्रवृत्ति छ, यो गलत हो । ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्नुपर्छ ।’–उनले थपे ।
उनले भने,‘हामीले अब विद्युत खपत बढाउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरतालाई कम गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारीमा लगाईएको कर संशोधन गर्न सकिन्छ, यो बजेट त यही आर्थिक वर्षको लागि हो नि, अर्को वर्ष पनि बजेट आउँछ । त्यतिवेलापनि एमेन्डमेन्ट गर्न सकिन्छ । कहाँ–कहाँ कमिकमजोरी छ, त्यो सरकारले सच्याउँछ । त्यसको लागि हामी अहिले छलफल र सरसल्लाह गरिरहेका छौं ।
रकार रिजिड छैन् ।’ यसबारेमा आफूले पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिवसँग छलफल तथा कुराकानी गरिराखेको दुगडले जनाए । सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि काम गरेको पनि दाबी गरे । उनले भने,‘कर तिर्ने र बैंकको ब्याज तिर्ने समय बढाईदिएको छ । तर, सरकारलाई पनि राजश्व आवश्यक छ । अहिले आर्थिक गतिविधि बन्द छ । सरकारले राजश्व बढाउने सोचेको छ ।’
२०७७ असार १४ गते १६:१८ मा प्रकाशित
माझीले ढुङ्गा सम्झेर १२ वर्षसम्म खाटमुनि राखेको मोती विश्वकै ठूलो !
एकाएक सूचना परिवर्तन भई लगानीकर्ताको बोनस सेयरको मात्रा यसरी बढ्यो
गैंडा चितवनमा जन्मिएर भारतमा चर्न जाँदैमा इन्डिएन राइनोसर हुन्छ ?
कति वर्षको हुनुभयो तपाई ? एकपटक यो पढ्नुहोस्